के धनी चिनियाँ मान्छे तारीख गर्न चाहनुहुन्छ र विवाह प्रार्य सेतो बालिका वा चिनियाँ बालिका । भिडियो डेटिङ
केटी मानक चिनियाँ मान्छे गर्न चाहन्छ मिति फिक्का छ (यो भ्रामक शब्द प्रयोग गर्न सेतो किनभने मान्छे लाग्छ हुनेछ तपाईं बारेमा कुरा गर्दै दौड जब तपाईं वास्तवमा बताइरहेका शाब्दिक रंग र को छाला)र सुन्दर).
धनी मान्छे जटिल छन् र धेरै कुराहरू विचार सँगै । एक कुरा को बारे मा धनी चिनियाँ पुरुषहरु: आफ्नो धन संग गर्न केहि छ, आफ्नो चिनियाँ पत्नी परिवार आर्थिक वा राजनीतिक स्रोतहरू, वा केही दुर्लभ अवस्थामा, उनको बुद्धि र दर्शन । यो शताब्दीमा, एक समय जब एक शायद बन्न सुपर धनी को समर्थन बिना विस्तारित परिवार, विशेष गरी चीन मा जहाँ सामाजिक वर्ग गठन गरिएको छ र अटल । पनि पटक को लथालिड़गको अवस्था मा भने, तपाईं जाँच पृष्ठभूमि को सबैभन्दा एच, तपाईं पाउन चाहन्छु कि तिनीहरूले थिएन संग शुरू केही छ, तर सामान्यतया पत्नीहरू’ सहयोग गर्न. त्यसैले, यो बुझ्ने छ पाउन आफ्नो पत्नीहरू धेरै शारीरिक आकर्षक छ । (कुरा राम्रो प्राप्त दोस्रो र तेस्रो पुस्ता ।) राम्रो लागि रूपमा, सन्तानले ती, प्रेम विवाह गर्न एक सेतो केटी जो पनि स्वतन्त्र हुन नियन्त्रणमा को परिवार । तर कुरा फरक छन् भने हामी उत्प्रेरित गर्न दृश्य को, जहाँ चिनियाँ एक बरु सीमित विकल्प छ, विशेष गरी दशक पहिले । उदाहरणका लागि, म सम्झना हङकङ, गीत मेई- भतिजा, विवाह एक हलिउड स्टार उहाँले थियो जब हस्टन चलिरहेको आफ्नो तेल कम्पनी हो । यो विवाह समाप्त सम्बन्धविच्छेद संग हुनत । स्पष्ट, यो महिला बस एक विजयी चिन्ह पत्नी । कसरी निर्भर शिक्षित, स्मार्ट, र सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा कसरी धनी छन्.
यदि तपाईं प्रदान गर्न सक्दैन केहि बाहेक अरू के हुन सक्छ गरेका, सबैभन्दा रुचि हुनेछैन
बनाउन आफैलाई बाहिर खडा र सायद कुक भन्दा राम्रो के उहाँले गर्न छ कि लगभग तपाईं तल एकल अंक गर्न. यदि पाठ्यक्रम, तपाईं मिल्यो परीक्षण पारित गर्न आफ्नो आमा को व्यवस्था गर्ने माग जापानी शैली गृहिणी कौशल छ । यदि तपाईं गर्न सक्छन् बस भेट्ने आशा, तपाईं हुन सक्छ एक शट छ । वा, तपाईं बस अर्को मेल आदेश दुलहीको गर्न सक्दैन जसले कुक वा घरको कामकाजमा र राम्रो अझै हुर्काउन हाम्रो छोराछोरीलाई । वा चिनी छोरीहरू तर विवाह को लागि धेरै सामाजिक कारण तिनीहरूले बरु एक चिनियाँ महिला, जबसम्म तिनीहरूले छन् वा जन्म र खडा मा पश्चिमी संसारमा, त्यसपछि शायद विवाह सेतो महिला वा अन्य कुनै थए । जहाँ चिनियाँ मा काम, कहाँ छ, चिनियाँ विवाह एक केटी छ । यो चिनियाँ तर्क छ । तिनीहरूले गर्छन विवाह गर्न एक देशी केटी कुनै कुरा के रंग त्यो छ । खैर, म तपाईंलाई बताउन सक्छन् चिनियाँ धनी मान्छे छैन भनेर इन्कार प्रार्य बालिका, तर तपाईं सोध्न तिनीहरूले गर्न चाहनुहुन्छ भने, म पक्कै । लागि सबैभन्दा धनी मान्छे, तिनीहरूले आनन्द रात संग सम्बन्ध पश्चिमी बालिका । तर के तपाईं कुरा भने विवाह । तिनीहरूले विचार छैन भने कि.
पनि भने तिनीहरू गर्छन् । आफ्नो आमाबाबुले स्वीकार छैन
विशेष गरी सबैभन्दा धेरै धनी परिवार, आमाबाबुले मा धनी परिवारको निर्णय एक धेरै । राम्रो छ । बस जस्तै, पहेंलो ज्वरो, सेतो लहर छ बस रूपमा बलियो छ । धेरै चिनियाँ मा सेतो महिला लागि उच्चता कारण, अद्वितीय काया, वा बस प्रेम । डेटिङ एक सेतो महिला को शीर्ष मा छ के गर्न सूची मा हरेक चिनियाँ मानिस सूची गर्न, तर वैवाहिक सूची । चिनियाँ मान्छे एक वास्तवमा लागि थाह विवाह एक सेतो स्त्रीले आदर्श छैन
← कहाँ छन् सबै भन्दा राम्रो ठाउँमा लन्डन मा पूरा गर्न एक चिनियाँ केटी । भिडियो डेटिङ
निःशुल्क भिडियो च्याट मोबाइल मा →